Madagasikara · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Madagasikara tamin'ny Desambra, 2008
Madagasikara: Televiziona noterena hijanona
Fahalalahàna miteny 23 Desambra 2008
Noho ny nandefasany ny lahatsarin'ny mpanohitra iray an-tsesintany dia nakaton'ny fanjakana ny VIVA televiziona. Miady hevitra momba ity fanapahan-kevitra politika ity sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fahafaham-pitenenana ny mpamaham-bolongana.
Madagasikara, Kenya: Fahendrena ve ny mampanofa tany ny vahiny?
Katara 21 Desambra 2008
Noho ny horakora-pahatezerana nisy teto an-toerana sy iraisam-pirenena, dia natsahatra ihany ilay fifanarahana hampanofa amin'ny orinasa Koreana Tatsimo Daewoo Logistics ny ampahany betsaka amin'ny betsaka ny tany azo volena eto Madagasikara. Nefa mihamitombo hatrany koa etsy ankilan'izany ny fifanarahana fampanofana tany eo amin'ny firenena manankohariana sy ny firenena an-dalam-pandrosoana, ary dia manontany tena ny mpamaham-bolongana raha tena ahazoan'ny olo-tsotra tombotsoa tokoa itony karazana fifanarahana itony.
Madagasikara: Namaly izay lazaina fa sivana atao amin'ny piesy “47” Lafrantsa
Frantsa 21 Desambra 2008
Pierre Maury no mitatitra fa efa novalian'ny fitondram-panjakana frantsay ny fanamelohana fa tratran'ny sivana ilay piesin'ny tantaran'ny tolona ho amin'ny fahaleovantena “47″ nataon'i Jean-Luc Raharimanana sy Thierry Bedard. Victoire Bidegain Di Rosa, mpanolotsaina ao amin'ny minisiteran'ny kolontsaina frantsay no manazava fa tsy voatery hahaliana ny firenenkafa aty amin'ny faritra ilay...
Frantsa 15 Desambra 2008
Madagasikara: Famakiam-boky mandehandeha hampirisihana vakinteny
Fanabeazana 05 Desambra 2008
Tahina, mamaham-bolongana ao amin'ny Madagasikara tsy ilay sarimihetsika, no mamoaka sary vitsivitsy ny “bibliobus”, famakiam-boky iray anaty fiarakodia mandehandeha, tetikasa iray entina hampiroboroboana ny famakianteny eto Antananarivo (en). Nohazavainy ary fa nahitana fahombiazana tanteraka ity tetikasa ity ho an'ny manodidina azy. ” Raha toa tsy afaka mankany amin'ny famakiam-boky ny...
Borkina Faso 02 Desambra 2008
Andro vitsivitsy lasa izay dia nitagy ny mpamaham-bolongana namany i Théophile Kouamouo [Fr], mpamaham-bolongana mipetraka any Abidjan (Côte d'Ivoire), hilazalaza ny eritreriny tsirairay avy amin'ny antony hamahanam-bolongana momba an'i Afrika: Bloguons nous pour la diaspora et le vaste monde, coupé de nos contemporains sur le continent ? Blogue-t-on sur l'Afrique comme...
Madagasikara: Ady amin'ny fanamoramorana mandritra ny andro manerantany iadiana amin'ny SIDA
Fahasalamàna 01 Desambra 2008
Mampahatsiahy ny mpamaky azy ny mpamaham-bolongana mandritra ity andro manerantany iadiana amin'ny SIDA ity fa na dia eo aza ny fandrosoana misy eo amin'ny fisorohana ny VIH sy ny fitsaboana ny SIDA ity, dia tsy tokony ho moramorainy amin'ny fisorohana azy ny tsirairay. Nandritra “Ny tenin'ny Filoham-pirenena” fanaon'ny filoha Marc...